बुबाले ठगेको भन्दै पूर्वमन्त्री कृपाशुर शेर्पाका छोरा गणेश ‘सिधाकुरा’मा,रविले यसरी दिए प्रधानमन्त्रिलाई शुभकामना!(भिडियो सहित) - VOICE OF NEPAL
बुबाले ठगेको भन्दै पूर्वमन्त्री कृपाशुर शेर्पाका छोरा गणेश ‘सिधाकुरा’मा,रविले यसरी दिए प्रधानमन्त्रिलाई शुभकामना!(भिडियो सहित)
३० चैत्र २०७५, शनिबार १९:३४ 150 ??? ???????
पूर्वमन्त्री कृपाशुर शेर्पाले छोरा गणेश शेर्पालाई अंश दिने आशमा फसाएको आरोप छोराले लगाएका छन् । ५ बर्षदेखि अदालतमा चलिरहेको अंशमा मुद्धामा कृपाशुरले १ करोड ६५ लाख नगद र दुई रोपनी जग्गा दिने भन्दै बाबु छोराबीच सम्झौता गरेका थिए ।
कृपासुरले १ करोड ६५ लाखको चेक काटेर छोरालाई देखाए तर पछि दिइहाल्छु भन्दै आँफै राखे । चेक देखाउँदै दशलाख रुपैयाँ नगद दिएर सबै पैसा बुझेको कागजमा हस्ताक्षर गर्न लगाए । तर जब कागजमा गणेशले हस्ताक्षर गरे, तब कृपाशुरले गणेशको नाममा दिएको १ करोड ६५ लाखको चेक च्यातिदिएको उनका छोरा गणेशको आरोप छ ।
उनका अनुसार ५ बर्षसम्म अदालतमा मुद्धा चल्दा समेत वेवास्ता गर्दै आएका कृपासुर शेर्पाले पछिल्लो समय एकाएक व्यवहार परिर्वतन गरेका थिए । उनले छोराको परिवारलाई समेत माया गरेको जस्तो गर्थे तर त्यही माया देखाएर सम्झौता गराउने र चेक च्यात्ने उनका दाउ रहेछ ।
चेक च्यात्न पनि पैसा दिने र जग्गा दिने भन्दै गणेशलाई फकाइरहेको कृपासुरले आजकल छोरा गणेशको फोन उठाउँदैनन् । घरमा फोन गरे वा गए उल्टो धम्की आउने गरेको गणेश बताउँछन् ।
हामीले यो बिषयमा पटक पटक कृपासुर शेपासँग बुझ्न खोज्दा उनले हामीसँग कुरा गर्नै चाहेनन् । बरु टिभीमा देखाए मानहानीको मुद्धा हाल्ने भन्दै धम्काए ।
यति मात्र नभई कृपासुरका तर्फबाट अदालतमा बहस गरिरहेका अधिवक्ता तुलशीशंकर अधिकारीले समेत अदालतमा बढी कोर्ट फि तिर्नु पर्ने भन्दै १० लाखको मात्रै कागज गराए पनि १ करोड ६५ लाख दिने सहमति भएको तर कृपासुरले नदिएको बताएका छन् ।
कृपासुरले छोरालाई अंश दिने भन्दै कागज गराएर छोरालाई मात्रै झुक्याएका छैनन्, काठमाडौ जिल्ला अदालतलाई समेत झुक्काएका छन् । बाबुले अंश नदिएपछि गणेश अहिले सवारी चालकका रुपमा काम गरेर जिविकोपार्जन गरिरहेका छन् । अर्बपति पूर्वमन्त्री शेर्पाका छोरा यस्तो अवस्थामा छन् ।